वर्षमा एक चोटी गर्ने काम दिनहुँ गर्ने बानी बसालौं
News Category 2078/07/14
हरेक वर्ष चाड पर्व नजिकिदै जाँदा विभिन्न स्थानको सरसफाइदेखी सार्वजनिक स्थानमा रहेको बिजुली बत्तिको मर्मत गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखि गर्ने गरिन्छ । विशेष गरि यो कार्य दशैं र तिहारको आगमनसँगै गर्ने गरिन्छ । वर्षको बाँकी रहेको एघार महिना त्यस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्न् । ती समयमा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु गोष्ठी, सेमिनार, बजेट बनाउन तथा विभिन्न पंचायतीमा बढी समय खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विकासीय कार्यको समय नै तोकिएको हुन्छ । त्यो हो असार महिना । साल तमामीको यस महिनामा जनप्रतिनिधिहरु हतार हतारमा बजेट सकाउन पनि विकासीय कार्यमा जोड दिएको देखिन्छ । हुन त यो बानी सानै देखी लागेको हो । विगतका वर्षहरु देखी नै यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
तर अहिले समय परिस्थिति बदलिएको छ । अहिलेको समयमा मानिसहरु सबै भन्दा बढी स्वास्थ्यमा ध्यान दिने गरेका छन् । आधुनिकतासँगै विभिन्न खाले रोगहरुको पनि आवगमन भएको छ । यस्ता रोगहरुलाई परास्त गर्न सरसफाई नै हो । सरसफाईको नाममा स्थानिय तहले बजेट त छुट्याउँछन् तर, त्यसको उपयोग कागजी काममै गरेको पाइएको छ । कागजमै सरसफाईको काम गरेर बजेटलाई मिलान गर्ने काम पनि गरेको पाइएको छ । वर्षमा एक पटक मात्र सरसफाई गरेर हुन्छ त ! के जनतालाई चाडपर्वमा मात्र सरसफाई चाहिन्छ ! यो एउटा गम्भिर विषय हो । सरसफाई भन्ने कुरा दिनहुँ हुनुपर्दछ । सरसफाई भएका अधिकांश रोगहरु आफै उन्मूलन हुनपुग्छ । एकै पटक गर्ने सरसफाइलाई दिनहुँ गर्न सकिए पक्कै पनि यो कार्य गर्न कठिनाई हुँदैन् । यस्तै वर्षमा एक पटक बिजुलीको पोलहरुमा बत्ति जडान गर्ने कुरा पनि सुहाउँदो होइन् । एक महिना बत्ति बल्ने अनि बाँकीको समय अध्यारोमै बस्ने यो कतिको जायज हो ? हो यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले मनन् गर्नै पर्छ ।
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले यस्ता कार्यहरुका लागि दुरगामी नीति बनाएर अगाडी बढेमा पक्कै पनि सजिलो र जनतालाई जवाफ दिन सजिलो हुन्छ । तर, यस्ता कार्य गर्नका लागि उनीहरुले सीमित महिना नै तोकिसकेका छन् । तसर्थ यस्ता विषयलाई गम्भिरतापूवर्क मनन् गरेर दिनहुँ गर्ने परिपाटी बसाल्नु नै जायज हुनेछ । अनिमात्र जनप्रतिनिधीहरुको कदर पनि हुन्छ ।